I-ALBHAMU EZINGAMA-200 EZIGQWESILEYO ZAMA-2000 - IINDABA
I-albhamu ezingama-200 ezigqwesileyo zama-2000
Ukusuka kwi-MIA KwiTet ezine, Kanye West ukuya kuJoanna Newsom- nakumacala amaninzi eRadiohead, naye-nazi ii-albhamu ezichaze iminyaka elishumi
Abantu / Ilizwe
Ipop / R & B
Okthobha 2 2009
Xa iRadiohead's Umntwana uA yaphuma ngo-Okthobha u-2, 2000, abantu abaninzi besiya kwivenkile egcina irekhodi lezitena nodaka kwaye banikezela ngeedola ezili-16 ezinkozo ukuthenga icwecwe elikwiCD-kwaye ukuba bafuna ukumamela ekuhambeni, bayifaka loo CD a Discman. Xa kwakhululwa iqela elinye Kwiimvula Ngo-2007, uninzi lwabo bantu babesiya kwi-intanethi kwaye bahlawula nantoni na abayifunayo, emva koko bayimamela kwifayile yekhompyuter kwifowuni yabo. Nangona i-albhamu yayingafakwanga kwilizwe lezinto ezibonakalayo, yayihlala iyindlela yokubonisa amagcisa ajonge ukwenza ingxelo engapheliyo.
Aba bazobi babandakanya amaqonga aphezulu njengeKhan West, iArcade yoMlilo, kunye neMIA, abathi bandise indawo yehip-hop, indie-rock, kunye pop (ngokwahlukeneyo) kunye neerekhodi zabo zokuqala zenyikima. I-Strokes, Ewe Ewe Ewe, kunye ne-TV kwiRadiyo yazisa ilitye laseNew York, ngelixa iBritane yenza ii-Tet ezine kunye noBurial zihlola ngaphantsi komculo we-elektroniki. Ukuqokelela kwezilwanyana kunye noJoanna Newsom bayeke iiflegi zabo ezibhabhayo zibhabhe zize zisebenze ngendlela emangalisayo. Indawo eyaphukileyo yoLuntu, iGrizzly Bear, iSufjan Stevens, kunye neFleet Foxes zandisile iphalethi ye-indie-rock njenge-LCD Soundsystem kunye ne-Hot Chip yenza ukubila komdaniso. Kwaye bethetha ngeRadiohead: Bahlala ubomi bomculo aliqela kwiminyaka elishumi, ukusuka kwi-techno enomkhenkce ukuya kwi-acoustic lullabies, ibonakalisa ixesha lokuhamba kunye nokunokwenzeka okungapheliyo. Ke njengokuba itekhnoloji iqhubeka ukuqhubela phambili-kwaye mhlawumbi sinokufumana amandla okukhanyisa umculo ngqo kwii-brainstems zethu- ezi zii-albhamu ezingama-200 ezisuka kowe-2000s esiza kuphinda sizenze.
Into yokwenene yokulala, irekhodi likaJay Reatard lokuqhekeza lisaqhubeka nokugxeka abagxeki kunye nabalandeli kakuhle emva kokukhululwa. Imibono yegazi yi-crossover ngeyona ndlela intle yekota, ibiba amandla kunye nesimo sengqondo se-punk, iingoma zepop yamandla, kunye nobuchule oburhabaxa bokurekhoda kwigumbi lokulala. Phambi (née Jay Lindsey) usebenzisa yonke into anayo ukwenza ii-symphony zezona ndawo zilula: i-yelp enomdla, ikatala ye-acoustic, i-flying-V riffs, iingoma ezikrakra (kwaye ngamanye amaxesha zinogonyamelo). Konke okuthathayo yayiyinto encinci yokucula kwaye uxuba uncuthu oluthile kunye nenyongo ukuze ame abalwe; kodwa njengesigqubuthelo secwecwe, uya kugutyungelwa ligazi ngexesha lokubala. -UJason Crock
Mamela: UJay Reatard: Isithunzi sam
Iapile O ?? '
Umqambi wale mihla uyala ukufa. Utsho njalo umzali wakho wale mihla umqambi uFrank Zappa (ecaphula uVarèse), kwaye nangona iintshaba ezingenakubalwa ziya kuzama ukukuqinisekisa ngenye indlela, eyokuqala njalo kunokwenzeka. I-Deerhoof yimeko ngakwicala: i-Bay Area quartet yenza umculo oyipunk, kodwa pop; zinengxolo kodwa zintle; iqulunqwe kakuhle, kodwa yenziwa ngokudubula. Iapile O ’ ubabambe kwinqanaba lokuncipha phakathi kweentsuku zabo zokuqala ezinengxolo kunye nomculo wobuntununtunu ngokuthelekisa zonke iirekhodi zabo ukusukela. Njengamabhanti amaninzi abalaseleyo kwiminyaka elishumi (Animal Collective, LCD Soundsystem, Knife), iDeerhoof yenza umculo okhawulezileyo obonakala ngathi unabalingisi abaninzi - kanti, akukho mntu wumbi ukwazileyo ukuvelisa nantoni na efana ne-Sealed With Kiss, okanye iRavel -Ezinye iziqhamo ezingavumelekanga. Ukuba ii-hybrids zomculo zawa njengeziqhamo ezixhonywe kancinci kwii-'00s, Iapile O ’ yayivuthiwe, umsebenzi wobugcisa wokuqala. –I-Dominique Leone
Mamela: I-Deerhoof: IPanda Panda Panda
Mamela kuyo nayiphi na ingoma engaqhelekanga evela Akuma No Uta , kunye neempembelelo ezininzi zithi qatha ezingqondweni — Umhlaba, MotIsiqithirhead, I-Stooges, iBlue Öyster Cult, iFushitsusha. Kodwa mamela lonke eli cwecwe kwindawo enye ende, edlamkileyo, kwaye kunzima ukucinga ukuba yenziwe nangubani na ngaphandle kukaBoris. Ukutshaja, ukugcwalisa umsi, kunye nokuluhlaza, kukuphikisana kwetoni kukaNick Drake, kabani Uluhlu lweBryter ikhava ye-albhamu iphinde yenziwa ngaphambili. Kodwa kanye njengokuba uDrake wayezinikele kwizandi ezimnene kunye nokwehla kwendlela, uBoris uzinikele ngokungagungqiyo kwizithambeka ezingahambelaniyo kunye nezingqisho ezinzima, nokuba zihanjiswe kwiidrones ezinde, ezingcangcazelisayo okanye ezomlilo. Indawo ephambili yelicwecwe, ijamu yemizuzu eyi-12 ejijekayo uNaki Kyoku, eneneni iqala kwisimo sokubonisa esikude kude ne-Drake's melancholia. Kodwa, njengakwezinye Akuma No Uta , U-Boris uthatha loo mpembelelo kwaye uyitshise kude, eshiya umkhondo weeringi zomsi ezichaze ngokucacileyo igama leqela. -Izifundo zeMarc
Mamela: Boris: UNaki Kyoku
Ngohlobo lokufudumala kweanalogs uninzi lwabaphulaphuli banqwenela ukuba bafumane kwiZilwanyana eziHlanganisiweyo, irekhodi likaYeasayer laseka indawo enesithintelo phakathi kwezinye izinto ezazichasene ngaphambili: iparanoid post-punk yelps kunye ne-psychedelic, iingoma ezihambelanayo, isiginci se-noodle kunye nokuhlamba kwebhodi yezitshixo, izixhobo ze-elektroniki kunye nezandi ezisebenza ngokuvisisana. Isiphelo asinakho ukwahlulahlula, kumaxesha anamhlanje okujija okwandileyo kunokuba yenye yezincomo onokuthi uzinike. -Rob Mitchum
Mamela: Ewe: Ukuphuma kwelanga
Ukwahlukana kwemiphanda I-IV
Iseti yevolumu ezine Ukwahlukana kwemiphanda beza ne-backstory enganyanzelekanga: igqala lemultimedia lomculi uWilliam Basinski, ezama ukufaka ikhowudi kwi-loops awayeyenzile kwiminyaka eyadlulayo, wafumanisa izinto ezikwimagnethi zikwimeko ehamba phambili yokubola, eyenze ukuba umculo uphele xa kudlula zonke iintloko zeteyipu . Ke izandi, i-hypnotic kwaye zibhalwe ngokutyebileyo ngokwazo, beziwela ngokoqobo kwaye zinyamalala emoyeni njengoko iziqwenga ziqhubela phambili, zikhokelela kumculo oziva unzima ngokudakumba kunye nelahleko nanjengoko uziva ubukeka kwaye ungabinabunzima. Ukongeza olunye umaleko wobubi, iiteyiphu ezinxungupheleyo zadluliselwa kwidijithali ngexesha lika-Septemba 11, kwaye iBasinski esekwe eBrooklyn yenza uguqulelo lweDVD lweprojekthi, iseta umculo odumbayo kwividiyo emileyo eyadubula iLower Manhattan. umfanekiso ukwasetyenzisiwe kumaqweqwe e-CD. Ukuzalwa ngokungaguqukiyo kokuhlangana kwexesha, indawo, kunye nemeko, Ukwahlukana kwemiphanda ayilahlekanga namnye kubuhle bayo obugqithisileyo kule minyaka idlulileyo. -UMarko Richardson
Mamela: UWilliam Basinski: Dlp 1.1
UBonnie iNkosana uBilly
Iintambo ezinqabileyo ezivulekileyo Uthando luza kum-ingoma yokuqala Ukuyekelela— ngokungathanga ngqo vula ukuvulwa okuchukumisayo kwe-Schubert's String Quintet kwi-C Major, enye yezona zinto zibalulekileyo zomculo ezakha zabhalwa. Icwangciswe nguNico Muhly, okhawulezayo ukuba ngumqambi wendlu we-indie ongafanelekanga, babonisa imvakalelo ye-albhamu yokugqitywa kwengcwaba, echazwe sisihloko kwaye iqiniswe kuyo yonke indawo kwi-albhamu, ukusuka ekuncwineni komculo kaWill Oldham ukuya kwizwi elikude elixhasayo kaDawn McCarthy, ongena ngaphakathi nangaphandle kwe-albhamu kubonakala ngathi uthanda yena. Ukuxinezeleka, ukuxhatshazwa ngobulumko kunye nosizi olungenasiphelo, kwaye uzuze ngokuyeka ukuyeka, Ukukhulula uziva ngathi uqinisekile ngokuzola komntu oye wabona okungaphaya. -UJayson Greene
Mamela: UBonnie iNkosana uBilly: Uthando luza kum
Ingoma kaSimon kunye ne garfunkle kathys
Emva kwenqanaba elinzima elihlala ngaphezulu kweshumi leminyaka, uPulp wavela kwiminyaka ye-1990 njengobomi obonganyelweyo beqela. Ukuphela kweshumi leminyaka, babekhwele i-hellish begibela ekhaya. Siyabuthanda uBomi ndithathe apho Oku kunzima ushiye, uvuthulula i-hangover ukuze ujongane nayo nantoni na elandelayo. UJarvis Cocker uqhekeza elangeni, ebuyela ngokufuziselayo phantsi komhlaba kuLukhula kwaye ephantsi komhlaba emlanjeni oqukuqela ngaphantsi kwesixeko saseWickerman. Indlela yakhe eya kulonwabo igcwele kukufa, lusizi, ukwaphuka kwentliziyo, kunye nokudideka, kodwa kusekho indawo yokuhlekisa, kwaye sifumana eyona Pulp ingcono kwi-Bad Cover Version. Elinye iqela kunye nomvelisi uScott Walker benza umoya ococekileyo wohambo lukaCocker oluya kubomi obutsha. Ekugqibeleni wafika apho kufutshane nobungangamsha, ekuphumeni kwelanga, ukuvuseleleka kwelinye lamabhande okuqala kule minyaka ingama-30 idlulileyo. -Joe Tangari
Mamela: Intlama: Inguqulelo embi yeKhava
Ukuba iNew Weird America ibikhona ngenene, Nantsi iNdlela ngeyayiyingoma yesizwe. I-credo ivula i-albhamu yokuqala efanelekileyo kunye ne-Devendra Banhart kuphela kwaye ngokukhawuleza ihambisa isimo sengqondo kunye nokuzithemba, ibhengeza amalungelo ka-Banhart njengomntu ngamnye (iindevu, ukwabelana, ukunyaniseka, indalo) kunye neminqweno yakhe yokunqoba izinto eziqhelekileyo kunye nezimumu. Ngokuqinisekileyo, u-Banhart ukhetha isiginkci sakhe esine-tinny kwaye unikezela amagama acacileyo, kodwa ungumalusi nje ohambisa isibhengezo esongelwe ngesinxibo segusha: Siyazi / Sikhethile / Sikhethe ukuvuya, uyavala, alahle yonke into indlela enoburharha, engaqinisekanga ngaphambili. Iingoma ezilandelayo azinabubi kwaye zinomoya, ngokuxhomekeke ngokulinganayo kwii-wry winks (Le ndevu yeyakwaSiobhan) njengemvakalelo engathathwanga (Umntwana waseAntumn). Ukuveliswa kukaMichael Gira kunye nokuhlelwa okunamandla kuphazamisa amandla eVanhart's vibrato kunye nombono ngelixa unika iingoma indawo ezinje ngobuhle be-oddball zifanelwe. Ilula kwaye intle, Ukuvuya ihlala iyigugu lomzuzu ongenamsebenzi okhokelayo. -Grayson Currin
Mamela: UDevendra Banhart: Nantsi indlela
I-Bang Bang Rock kunye neRoll
Umhlaba awuzukuphulaphula. Iminyaka emine emva kokuba u-Art Brut (eyile) yaqhekeka, iindlela ezininzi kakhulu zisenza okungalunganga. Ukuguqula ukunyaniseka kwabo ukuya kwi-11 kwaye banethemba lokuba baya kudibanisa ngokwaneleyo ukuba babe yi-anthem. Ngobungcali ukuboleka izitayile zamagorha abo-nokuba yiVelvet Underground, iGang of Four, okanye, isihogo, iShaggs-kodwa uswele umoya. Nguwuphi loo moya? Nawuphi na umoya. Okanye ukuyidlala ipholile ngasemva kwemakrofoni, ngokungathi kunokwenzeka ukuba umntu abe nemibono yokuba banesisafu. Njengo Abathandi banamhlanje kwisizukulwana esilunyulweyo I-albhamu eblue , I-Art Brut's greatly debut projektha ye-frontman u-Eddie Argos 'Pulp-like wit kwiingoma ezingaqhelekanga malunga nobugcisa, amantombazana, kunye neeroses zobuqu ezithandekayo-andikazifumani zonke izingqinisiso zase-Italiya. Kulabo bafuna ukwenza iqela lomculo, bayakukhahlela. -UMarc Hogan
Mamela: Art Brut: Yenziwe iBhanti
Ingxelo ye-callahan yegolide
Ngamanye amaxesha kuyabhatala ukwazi ukuba ungubani: Umoya uzimbile umthambo omncinci womculo we-elektroniki ngokukhawuleza kule minyaka ilishumi idlulileyo kangangokuba ngoku ide facto Umgangatho wegolide wobudala obutsha beGallic pop. Ngaphandle kokuma, umculo wabo ogcinwe ngononophelo kwaye ngamanye amaxesha ohloniphekileyo umculo uhlala uhlonitshwa ngabagxeki kunokuba uhlonitshwe. Oku kunokucacisa ukuba kutheni UTalkie Walkie ityibilikisiwe ngokungachazwanga; kunye namalungiselelo ayo e-baroque, i-shivery arpeggios, amagama aculiweyo, kunye nokuqwalaselwa ngenyameko kwezinye iinkcukacha ezincinci, UTalkie Walkie ihlala ingumsebenzi wobugcisa ozolileyo. NjengoBekk Ukutshintsha koLwandle , enye into ekuthiwa yi-Nigel Godrich eveliswe ngamanye amaxesha, le yinto ethandwayo ethandekayo kwiidriphu ezicothayo endaweni yokuqhushumba. Njengoko ii-trifectas zokuvula zihamba, nangona kunjalo, azizi thando lukhulu kuneVenus, iCherry Blossom Girl, kunye ne Run. -Mark Pytlik
Mamela: Umoya: UVenus
Ukugqiba ukutshintsha ukusuka kwigumbi lokulala le-acoustic ukuya kwi-pop yaseBeatlesque pop ngo-1998 XO , U-Elliott Smith uthathe indlela engaphantsi kakhulu ngo-2000 Umzobo 8 . Ayisiyonto isondeleyo njengamarekhodi akhe okuqala kwaye ayingobukroti kunye ne-bombastic njengangaphambili kwayo, Umzobo 8 kuphawula ukucokiswa kobuqili kwezakhono zokubhala ingoma zikaSmith. Umzobo 8 iyaphawuleka ngokuzithemba kwayo kunye noqeqesho lwayo-kwaye akukho nto iluphawu olukhethekileyo. Kodwa oku kuhamba ngokuqinisekileyo kweza nohambo olunzulu kulwimi olungapheliyo lwesitayile sentsimbi enkulu yeC-Classic Umzobo 8 enye yeerekhodi zikaSmith ezifikelelekayo nezonwabisayo. -Matt LeMay
Mamela: U-Elliott Smith: Unyana kaSam
Mamela iirekhodi zangaphambili zikaJamie Lidell-igama lakhe elinegama elifanelekileyo UMuddlin Gear okanye umsebenzi wakhe weSuper_Collider noCristian Vogel-kwaye uye uve umdlalo kaJack-of-all-playful kodwa ongazinzanga uzama ukufumana ilizwi lakhe. Ukukhawuleza ukuya ku-2005 Yandisa , kwaye uyifumene: Njengokuba amanqaku kaMark Pytlik kwiPitchfork ebhala icwecwe, Yandisa ngokuqinisekileyo inentlonelo kwizichasi zayo, kwaye zihlala zinxitywa ngokuzingca kumkhono wendlela nganye. Nanini na xa uLidell esenza isenzo esingaqondakaliyo esiya kookhokho bakhe beR & B, wenza njalo ngentlonelo - Yandisa Inongwe nge-chicanery eyoneleyo ye-elektroniki ngokudityanisiweyo idityaniswe nomxube ukukhumbuza abantu ukuba irekhodi ngokwenyani lalabelana ngendawo yediski kunye neetalente ezilinganayo ezifana ne-Aphex Twin kunye ne-Squarepusher. Kwaye nokuba uyayigampisa kwaye uyagigitheka njengenkosana eshushu efuna ukubonakalisa uPrince xa Ndibuya ujikeleze okanye ugoqoza njengomphefumlo omdala onentliziyo ekhubazekileyo kumdlalo wecwecwe wokumisa kufutshane neMidlalo yeziDenge, akukho mpazamo Yandisa Okokuqala nokuphambili yingxelo ephawulekayo eyenziwe ngumculi obalaseleyo. -UDavid Raposa
Mamela: UJamie Lidell: Xa Ndibuya Ndijikelezile
Izixeko eziFileyo, uLwandle oluBomvu kunye neMimoya elahlekileyo
Ngaphambi kokuba enze iingoma zokuphupha eziphuma ku-John Hughes 'celluloid teen angst, u-Anthony Gonzalez (kunye no-Nicolas Fromageau) wasinika lo mbhemu wesandi. Izixeko eziFileyo, uLwandle oluBomvu kunye neMimoya elahlekileyo yeyona rekhodi inkulu ye-M83, ishiya abaphulaphuli-loo miphefumlo ihlwempuzekileyo-iphantsi kwayo. Kodwa kubo bonke obo bunzima, iindonga ezigwenxa zegitare kunye ne-synth yeepics zokubaleka ukuya engcwabeni laseMelika kunye ne-0078h (eyayisoloko ibonakala kum njengelitye elingasemva njengoko bebezijonga ngesihlangu), bekukho ubushushu bokwenene icwecwe. Iimpawu ezihamba kancinci, eziqinisekileyo eCaweni naseLwandle oluMhlophe, kufutshane neNtaba eluhlaza ezivezwe kukuthandana kweengoma ze-M83 zexesha elizayo. -Joe Colly
Mamela: M83: Akukho
Izandi ezidiniweyo ze ...
Vula Izandi ezidiniweyo zeenkwenkwezi zesiCiko , UAdam Wiltzie noBrian McBride benza iphuli enzulu yedrone enzima kangangokuba amandla ayo omxhuzulane atsala izandi ezijikelezileyo, eziginya ziphelele. Ibhendi yayihleka kancinci ngeendleko zayo ngesihloko sealbham esineempawu zokuzithoba-le yayiyirekhodi yabo yesixhenxe yokungabinamandla, ukucotha okucothayo, kwaye apha bandise iplanga labo lamathambeka wolule iiCD ezipheleleyo ezimbini iqhekeza ngalinye phefumla ngokunzulu kangangoko. Umonde omkhulu luphawu lwawo nawuphi na umculo omnandi weedrone; UWiltzie kunye noMcBride banomonde kwimihlakulo kwaye bazisa uyilo oluchukumisayo kwisandi ngasinye abasenzayo ukwenza i-opus ye-ambient eyamkelekileyo njengoko kunjalo kwi-esoteric. -Joe Tangari
Mamela: Iinkwenkwezi zelanga: I-Requiem yokufa koomama uPt. 1
Umzimba, Igazi, Umatshini
Ubude obude besithathu beThermals sisilumkiso malunga nobungozi bolawulo lobuzwilakhe, nolawulo lobuthixo, kwaye ibinokuvela kuphela ngomsindo kunye nokudana kulawulo lukaGeorge W. Bush. Imizobo yeengoma zeconografi yenkolo kunye neziqubulo zedem-man zinike iPortland pop-punk band ukuba ivuselele injongo, kodwa ibinokuba ngumoya oshushu ngakumbi ukuba ibingatshatanga nezo riffs, sexy, throbbing basslines, kunye nokungxamiseka , iingoma ezinyanisekileyo. Uninzi lomculo woqhanqalazo lwakutshanje luyi-pedantic kunye ne-plodding, kodwa ngokuhanjiswa kwe-Thermals ngovuyo kunye nokubalisa (kwaye kungenjalo-ngokoqobo) ukubalisa amabali, bavuselela uhlobo lwesizukulwana esitsha. -Rebecca Raber
Mamela: Thermals: Nali ikamva lakho
I-Scarface aficionados isenokubuza irekhodi le-Def Jam ye-Facemob yeNew York egxile kwi-Def Jam njengommeli womsebenzi ogqwesileyo wegcisa. Kodwa ukuba Ukulungiswa ingqina nantoni na, kukuba iScarface lilizwe kuye, umlobi onqabileyo onobunzima bomculo opheleleyo, i-gravitas, kunye nomtsalane womxhuzulane womelele kangangokuba isixeko esipheleleyo sobugcisa sigoba kwicala lakhe xa efuna ukwenza into. Yintoni le yahlukile ngayo Ukulungiswa Okokuba, ngokwembono enkulu, ayivakali nantoni na efana nerekhodi ye-rap yaseNew York yexesha le-2002, ngaphandle kwe-Kanye West's basslines zomphefumlo ogqibeleleyo kunye neendawo zokuvelisa iindwendwe zaseNeptunes; Iingoma zikaScarface azitshintshi, amabali afanayo avela eSouth Side yaseHouston, ukubandakanyeka okufanayo nomdlalo ofanayo weziyobisi, ukuthembeka okungagungqiyo nokungavumi ukuncama iinjongo. -UDavid Drake
Mamela: Isikali: Kwibloko yam
Ngelixa i-elektroniki yokunyanzelwa kwee-1990s ithathwa njenge-epic isilele kakuhle ngaphambi ko-2000, ikhawulezisile incoko phakathi komculo wedwala kunye nomculo we-elektroniki. Kule minyaka ilishumi izayo, i-sequencer iya kuba yinto eqhelekileyo kumanqanaba amatye, kwaye umkhosi we-DJs (ngakumbi amaFrentshi) waphendula ngohlobo lokufaka ii-juggernauts zomculo wendlu nge-wallop egqwethekileyo yamandla okhetho. UDaft Punk kunye noBulungisa baveze iipropathi ezizukileyo zerwala, iAqua-Net, kunye nezinto ezikhuthazayo. Kodwa iVitalic yayiphantse ipunk , esiya kwii-synths zakhe ezinemisesane kunye ne-asidi squelches ngokungathi yeyokuqala kwikhathalogu yeSears. Oontanga bakhe bafuna ukukukhuthaza, kodwa ngamanye amaxesha ukhathazeka ngokuba uVitalic uzama ukukubulala. -Brian Howe
U-elvis costello ukumkani waseMelika
Mamela: Vitalic: Umhlobo wam uDario
Nantoni na abantu abathi ndinguye, yile nto andiyiyo
Kukho umgca ococekileyo xa kufikwa kubuchule. Ngaba ubuchule? Inomtsalane. Ngaba ujonge ukuba ngumntwana oneminyaka eli-19 ubudala? Uhlobo lophantsi. Iinkawu zeArctic uAlex Turner ngumba obonisa umthetho. Usika umzobo we-Holden Caulfield ngokugqibeleleyo, ejikeleza iSheffield kwaye ejonga ubomi bukaChav. Iinkawu zaqala zaphumelela ukubabaza ngenqindi, ukubetha igitala, kunye nokuziphatha okungathandekiyo kwiingoma ezinje ngokuba NdikuBheja ujongeka ulungile kwiDancefloor. Kodwa unyamezelo ziibhaladi ezidiniweyo. URiot Van umhle kakhulu kwaye uneenkcukacha malunga neengozi zamakhwenkwe aluhlaza okwesibhakabhaka iphantse inyanzelise ukuhambisa isandi kwinoveli ye-Irvine Welsh. Xa iLanga lisiya ezantsi libhalwe kakuhle-uhlobo lwengoma evakala isisiqingatha seminyaka ubudala xa iqala. Nditsho neentsomi zobuqhetseba zaseSan Francisco ziyatshisa ibile. Ngamanye amaxesha ukukhula ngokukhawuleza akukabi kubi kangako. -Sean Fennessey
Mamela: Iinkawu zaseArctic: Ndikubhejile ujongeka ulungile kwiDancefloor
Ukuxutyushwa nguGuy kuTshintshiselwano
UBen Jacobs kwafuneka asebenzise amagama. Ubuqili nobukrelekrele njengokuba imisebenzi yakhe yangaphambili yayininzi, wayenokuninzi awakuthethayo ngeli xesha, kwaye ke waqala ukubhala iingoma ze-pop-iingoma ezintsonkothileyo nezixakekileyo ezilinganisela kwizinwele zakhe i-OCD kunye ne-ADHD yakhe, kodwa iingoma ezazinomdla kwaye ziyamangalisa. Waqala ukucula (kwaye udade Becky wangena). Ubhale malunga nomsebenzi wethutyana, i-vinyl endala, ii-amino acid, kwaye, ewe, mantombazana. Le yayiyeyona nto intle: Ngoku wayenokucula ngamantombazana kunye nokutyumza nothando. Kwindlela yase-Bhritane eyinyani, wazisa umntu othobekileyo kumculo otyhoboza umnyama onomtsalane entliziyweni kwaye ogqithisa ingqondo. Kukho uvuyo kuyo yonke i-byte yeengoma zakhe: uvuyo lokujonga amantombazana, kunye nokujonga ii-diode ezikhanyisa ukukhanya, kunye nokuxelela umhlaba ukuba bobabini bazuke kangakanani. -Chris Dahlen
Mamela: UMax Tundra: ILysine
UAndrew Bird kunye neMveliso engummangaliso yamaqanda
Umhlaba awupheli ngengxolo okanye impempe, kodwa ngetheko. Phakathi kowe-2001 nowama-2003, uAndrew Bird wakhupha isitya sakhe somlilo, wafudukela kwifama, wawa kwigilasi ekhangelekayo kwilizwe elothusayo. Ukuveliswa okungummangaliso kwamaqanda Yeyona ngxelo inkulu yokuvuza emhlabeni ukuya kwirekhodi. AmaSpredishithi phezu kwamaphepha e-violin atyhidiweyo kwaye adityanisiwe adityaniswa yimpempe yakhe kunye nelizwi elipeyintiweyo ukubiyela iintengiso zokubulala, amabali abantwana abanengqondo alinganiswa ngeziphene, kunye nemisonto kubunzima bebhayoloji. Yintsusa yoqobo, ukusuka kumnatha omnene kaSovay ukuya kukungxamiseka kwamaza e-Fake Palindromes, i-eerie murk ye-A Nervous Tic Motion yeNtloko ngasekhohlo kunye ne-Ravel-quote bounce ye-Skin Is, My. Xa konke kungena emiqolombeni, intaka iya kubakho ukuze idlale phakathi kwengqushu, kwaye kuya kufuneka umjoyine ukuba unako. Kuya kubakho amashwamshwam. -Joe Tangari
Mamela: UAndrew Bird: Inkohliso yePalindromes
ii-cd ezintsha ezikhutshwe ngo-2015
inkathazo yesizwe iya kundifumana
I-nirvana ihlala kwindawo ephambili
dj khaled izitshixo eziphambili
Isandi sikajason isbell nashville
rico indlela endala edolophini